Ndị ọrụ njem na ndị ndụmọdụ: Pụrụ iche maka Ọganiihu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị ọrụ njem na ndị ndụmọdụ: Pụrụ iche maka Ọganiihu
Inweta njem nleta • Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Ịtụ egwu • culinary • omenala • Education • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Ịzụ ahịa • Egwuregwu • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ahịa ugbu a nwere nhọrọ karịa mgbe ọ bụla ide akwụkwọ ezumike ha. Travellọ ọrụ njem na-agbanwe ngwa ngwa na ọbụnadị ogologo oge ụlọ ọrụ Refeyim enweghi ike ịhapụ mgbanwe nke omume ndị ahịa. Iji lanarị, ndị ọrụ njem njem nwere ọgụgụ isi na ndị ndụmọdụ enweela ike iche echiche na mpụga igbe iji merie nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem n'ịntanetị (OTAs) dị ka Expedia, Priceline na Airbnb site na ịnye ọrụ pụrụ iche na ahụmịhe kachasị maka ndị ahịa ha.
Uru nke iche iche
N'ime ụlọ ọrụ asọmpi, iche iche na-enye obere ụlọ ọrụ ohere ịkpụpụta oghere na ahịa nke na-enye ha ohere ime nke ọma. Ndị njem njem na-ahọrọ ịga niche nwere nnukwu uru.
Ndị ọrụ njem na ndị ndụmọdụ ga-enyerịrị aka nke nnukwu OTA enweghị ike ịmakọ. Nzaghachi ngwa ngwa maka ịjụ ajụjụ, ịkpọtụrụ ndị ọrụ ntinye akwụkwọ ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere, otu ndị maara ihe niile na-ewulite obi ike na ndị ahịa na ha na onye na-eweta njem ma nwee ahụmahụ na-arụ ọrụ.
Na-ere otu ahụmahụ
Site na ndị na-azụ ahịa nwee ike ide akwụkwọ njem nke ha na ntanetị na ntanetị ole na ole, ndị ọrụ njem nwere ike imeri site na ilekwasị anya n'inye ahụmịhe, ọ bụghị naanị ọrụ. Site n’imeso ndị ahịa ha ihe n’otu n’otu, ụlọ ọrụ pụrụ iche nwere ike ịchọpụta ebe ha na-agbakwunye uru na nlekọta mgbakwunye nke mere ka ha pụọ ​​iche na nnukwu ụlọ ọrụ.
Azụmaahịa ọ bụla kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụ nke kachasị mma na mpaghara ya. Iwulite aha dika ndi njem njem puru iche adighi iche. Site na iji nkà na-arụ ọrụ nke ọma, ụlọ ọrụ na-eme njem nwere ike hụ na ha na ndị mmekọ na ndị na-eme njem nleta na-arụkọ ọrụ iji nye ndị nchịkọta ahịa kachasị mma maka ndị ahịa ha.
Ihe omuma, obi ike, na oru ndi oru nke ndi oru nleta ndi ozo n’enye aka n’enye ndi mmadu obi na ha gha enweta ezumike ha n’atu anya. Ma, ndị ahịa nwere afọ ojuju bụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ga-alaghachi na onye ndụmọdụ kachasị amasị ha.
Kama ịnwa ịre onye ọ bụla ahịa, ọkachamara na otu niche na-eme ka ọ dịrị ndị obere ụlọ ọrụ na-eme njem mfe ịchịkọta ihe ọmụma miri emi na ha nwere ike ịfefe ndị na-ege ntị na-ahọrọ.
Greatzọ dị mma maka ụlọ ọrụ iji gosipụta mpaghara ọrụ ha nwere bụ site na gTLD nke na-ekwupụta ihe ha na-eme nke ọma.
Ngalaba njem na-egosipụta nka pụrụ iche
Ndị ọrụ njem njem na ndị ọrụ njegharị na-eji usoro gTLD ndị metụtara njem gụnyere .travel, .vacations, .tours na ọtụtụ ndị ọzọ. Ngalaba ndị a na-eme ka ndị ọrụ niche na-eme njem gosipụta ndị na-ege ha ntị ihe ọkachamara ha gbasara. Iji gTLD ndị dị mkpa dịka akụkụ nke ahịa na njirimara njirimara na-enyere ụlọ ọrụ ndị a aka mee ka ọhụhụ ha na nyocha ha dị na ntanetị.
Ga njem dị ka ezinụlọ pụrụ ịbụ ihe na-akwụghachi ụgwọ, ma ọ bụghị ihe ịma aka ya. Ndị ụlọ ọrụ na-elekọta ezinụlọ na-ejegharị ejegharị ghọtara ebe njem, ụlọ oriri na nkwari akụ, na ụlọ ọrụ ndị ezinụlọ ahụ dum ga-anụ ụtọ, ma na-enyere ha aka izere ọnyà ọ bụla n'ụzọ.
Ezinne: Aha ngalaba ezinụlọ na-eme njem bụ aha azụmaahịa ya, nke na-enye ya ntọala dị ike maka ịme akara na nsonaazụ ọchụchọ maka ndị na-achọ azịza njem ezinụlọ. Ọ bụ obere ụlọ ọrụ na-aghọta mkpa dị mgbagwoju anya nke ndị nne na nna na-ejegharị na ụmụaka sitere na ụmụ amụrụ ọhụrụ ruo ndị ntorobịa siri ike ime ihe na-atọ ụtọ, yana ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche na-eme atụmatụ njem ọnụ.
Lọ ọrụ a bụ ọkachamara na atụmatụ njegharị, njem ọtụtụ ọgbọ na njikọta, njem njem ezinụlọ na ebe ntụrụndụ, ogige, ezumike Disney, na obere njegharị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ezumike dịka ezinụlọ, ị nọ n'aka na-enweghị nchebe ma a bịa n'ịhazi atụmatụ njem gị na ụlọ ọrụ ọkachamara dịka nke a.
Okporo ụzọ: Companylọ ọrụ a na-enye "ezumike njem" maka ezinụlọ nke afọ niile. A na-ewu ngwugwu ha gburugburu ahụmịhe zuru oke na ụlọ nkwari akụ na-eburu ụmụaka n'uche. Enwere isi ike na ntụrụndụ na ọtụtụ ihe ezinụlọ niile nwere ike isonye, ​​dị ka safaris, njem nlegharị anya, ịchụ nta ndị na-atụ ụjọ, na klaasị nri. A na-elekọta ihe niile site na mmalite ruo na njedebe, na-ewepụ nchekasị niile nke atụmatụ na njem ka ezinụlọ wee nwee ike ịnụ ụtọ nkeji ọ bụla nke ezumike ha ọnụ.
Royalreunions.na njem: Nbanye na njem bụ isiokwu ndị na-ewu ewu nke ndị na-eme nchọpụta na-eji iji chọta njikọ njem njem maka ezinụlọ ha. N'iji ntụgharị ede nke na-akwado nke ukwuu maka isiokwu ndị a na-enyere Royal Caribbean, otu n'ime ahịrị ụgbọ mmiri kachasị elu n'ụwa, ịnọ n'ihu asọmpi ha n'ịchọpụta ihe.
Mkpa njem pụrụ iche
Tournweta njem nleta bụ ahịa na-eto eto, yana obere ụlọ ọrụ na-achọpụta na ọ dị nnukwu mkpa maka ndị njem na-eme njem ọkachamara maka ndị ntị chiri, ọhụụ, na ngagharị.
Forall. Njem: Maka njem niile dị ka aha ngalaba ya pụtara - njem maka onye ọ bụla. Ha nwere ọpụrụiche na njegharị nke na-eme ka ndị ìsì na ndị njem nwere ike ịnụ ụtọ ezumike nke ndụ ha niile.
Emere ebe dị iche iche na ngwugwu dị iche iche kwa afọ, na-ekwusi ike na nkasi obi, ọgwụgwọ ọkachamara na ahaziri iche, yana nhọrọ ndị ahọpụtara maka ndị njem.
Travability. Njem: TravAbility bụ ndị na-akwado maka njem nlegharị anya, na-enye ndị nwere nkwarụ ohere ịga njem nwayọ gaa ebe ndị kacha elu n'ụwa.
Ọrụ ha bụ:
"Gbaa omenala niile nke ụwa ume ka ha hụ nkwarụ dị ka akụkụ dị mkpa nke ndụ, ma nyekwa mkpali na ngwá ọrụ na ụlọ ọrụ ndị njem iji nye ha ohere ịmepụta gburugburu enwere ike ịnweta nke ga-eme ka nsonye na ụzọ na-adigide akụ na ụba."
Handson. Njem: Aka bụ ụlọ ọrụ ndị ntị chiri nwere nke na-eme njegharị gburugburu ụwa maka ndị na-eji asụsụ ogbi. Onye guzobere ya chọpụtara na ọdịiche dị na ahịa ndị njem njem ọkachamara mgbe ọ hụrụ na ọtụtụ ndị njem ntị chiri na-ekwupụta ihe na-adịghị mma gbasara njem ha.
Site na mmalite ya dị ala, ụlọ ọrụ a na-agbasawanye ndị otu ya ma nye ha njem na mba 60 ugbu a. Ihe e mesiri ike bụ inye ọrụ dị oke mkpa site na ntuziaka asụsụ ogbi, obere otu, na ahụmịhe pụrụ iche.
Nordic. Mmeru: Ngalaba aha na-ekwu ya niile. Companylọ ọrụ a bụ ọkachamara na njem ụgbọ mmiri na Northern Europe, Scandinavia, na mpaghara Baltic.
Nordic Cruises nwere ọtụtụ njem ụgbọ mmiri na njem nlegharị anya dabara na mmefu ego ọ bụla, na-akwado onwe ya ịbụ onye na-eduga ndị ọrụ njegharị gafee Sweden, Norway, Finland, Estonia na Russia.
Savorthejourney.cruises: Nke a bụ obere di na nwunye gị n'ụlọnga ndị bụ ndị ọrụ ugbo na-akọ ugbo n'oge ọkọchị n'oge ọkọchị mana tụgharịa gaa na ndị ọkachamara na-eme atụmatụ njem na ndị njem ụgbọ mmiri mgbe ihu igwe malitere ịjụ oyi.
Site na ahụmịhe gara aga na ụlọ ọrụ njem na ahụmịhe nke na-ejegharị na mba 30, na-ewere 30 njem ụgbọ mmiri, na ịgagharị steeti 50 niile dị na USA, ndị otu a raara onwe ha nye ghọtara nkọwa zuru oke nke njem nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ezumike nrọ.
Na-atụ anya ya: Ogologo ụgbọ mmiri na-anya oke nhọrọ nke nhọrọ 32,812 na-agafe ụgbọ mmiri 612. Dị ka ndị ọkachamara na-enye ọrụ, ha nwere ike ịnye ndị njem "enweghị ofufe" na ndị hụrụ oke osimiri n'anya ngwugwu njem zuru oke maka mkpa ha, yana azụmahịa oge ikpeazụ maka ndị na-ahọrọ njem ezumike.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ibuli ọkachamara gị na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na dijitalụ ma chọta ezigbo aha ngalaba gị,chọta ma zụta ngalaba aha gị na njem gị na Travel.Domains.